Topnepalnews.com | महेन्द्रपथीय रणनीतिमा प्रचण्ड, ‘रअ’सँग किन यति धेरै निकटता ?
महेन्द्रपथीय रणनीतिमा प्रचण्ड, ‘रअ’सँग किन यति धेरै निकटता ?
Posted on: July 31, 2018 | views: 1675
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन र भारतका राजनीतिक चासो र चलखेल गर्ने राजनीतिक र गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग सम्बन्ध बढाएका छन् । कुनै बेला भारतीय र चिनियाँ एजेन्सीका अधिकारीबाट खतरामा रहेको भन्ने प्रचण्डले राजा महेन्द्र शाह पथीय राजनीतिलाई अगाडि बढाउन थालेका छन् ।
पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गरे पनि चिनियाँ तथा भारतीय अधिकारीले प्रचण्डलाई चलायमान बनाउन थालेका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
सोमबार चिनियाँ उप विदेशमन्त्री वाङ वाजुङसँग भेट गरेका प्रचण्ड मंगलबार भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाईसीस विङ (रअ)को प्रत्यक्ष आयोजनामा हुन लागेको कार्यक्रममा पनि पुग्दैछन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालमा भारतको सक्रियताका विषयमा प्रचण्डसँग जानकारी लिएका थिए । उनले नेपालमा भारतीय अधिकारीहरू आउने गरेको बताए पनि नेपालको विकासको लक्ष्य चीनसँगको साझेदारीमा नै हुने बताएका थिए । तर चीन यत्तिमा आश्वस्त हुने अवस्था भने छैन ।
उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले चीन र भारतसँग समदुरी राख्ने रणनीति अपनाएअनुसार नेकपाका नेतृत्वको भेट भइरहेको हो । तर प्रचण्ड भने महेन्द्र पथीय राजनीतिमा सक्रिय भएका छन् । उनले सरकार भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र तिनका प्रतिनिधिलाई पार्टी र सकारको नीतिका बारेमा बुझाउन थालेका छन् ।
‘उच्च अधिकारीसँग पार्टीको नीति र पार्टीले सरकारमा अख्तियार गरेको नीतिका विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले बुझाउने गर्नु भएको छ, दैनिकजसो उहाँको भेट दुवै देशका गुप्तचर अधिकारीसँग भइरहेको हुन्छ, उनीहरू जानकारी लिन आउँछन्’, उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर नेपालको नीति र आयोजनाका विषयभन्दा पर गएर कुराकानी हुने गरेको छैन ।’
चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग पुगेका चीनका उच्च अधिकारीहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार गठन भए पनि भारतसँग राखेको झुकावले चीनलाई अप्ठेरोमा नपार्नका लागि आग्रह गरेका थिए ।
चिनियाँ अधिकारीले नेपालको एक चीन नीति भनिए पनि ललितपुरमा राजनीतिक दलका नेताको सहभागीतामा स्वतन्त्रत तिब्बतका विषयमा भएको कार्यक्रमबारे सोधेका थिए । प्रचण्डले त्यसमा सरकार र पार्टी अनभिज्ञ भएको भन्दै ढाँटेका थिए ।